Ngosipụta iphone, Iphone Screen, Iphone Parts - TC
TC nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500 na ihe karịrị 5,000 square mita ogbako ebe ugbu a, ha niile bụ ndị na-enweghị ntụ, ebe obibi okpomọkụ na iru mmiri oge niile, gụnyere ihe karịrị 1,000 square mita 100 klas na-enweghị ebe obibi.
The ụlọ ọrụ nwere ike oru na management otu, gụnyere ihe karịrị 20 R & D otu òtù, e nwere ihe karịrị 50 ọkachamara injinia na nhazi, akụrụngwa na àgwà.
You maara ma ọ bụrụ na mbụ na ihuenyo na-anọchi mgbe repai ...
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ezutekarị ọnọdụ nke na ekwentị mkpanaaka ihuenyo agbajikwa site na mberede, ụfọdụ na-agbajikwa iko mkpuchi, ụfọdụ ndị dị n'ime ihuenyo adịghị egosipụta na-agbajikwa. Nke ...
You maara mmepe nke ekwentị mkpanaaka? Ọ n'ezie ch ...
BPM Era N'ikwu okwu banyere ngwaahịa a, ụfọdụ ndị ga-ahụrịrị ya. N'ezie, n'ikwu okwu, a gaghị akpọ ngwaahịa a ekwentị mkpanaaka. Ngwa a pụtara na narị afọ nke 20, whe ...
Mgbe ngosipụta nke ekwentị mkpanaaka ngosi ihuenyo, Wher ...
Ikike abụwo ụzọ dị mkpa na mmepe nke ihuenyo ekwentị mkpanaaka, mana ekwentị mkpanaaka nwere ihe karịrị sentimita 6.5 adabaghị maka ijide otu aka. Ya mere, ọ bụghị diff ...
Gini mere ihu igwe kacha eji ihu ala mgbe ekwentị mkpanaaka ...
Ka m buru ụzọ juo gị ajụjụ A na-etinyekarị ekwentị mkpanaaka na tebụl mgbe ejighị ya, you na-etinye ngebichi elu ka ọ bụ ngebichi ahụ? Ma ị maara ihe? Tinye ekwentị mkpanaaka ...
Na-etinye ogo ya mgbe niile ma na-elekọta ngwaahịa ngwaahịa nke usoro ọ bụla
TC na-emejuputa sistemụ njikwa njikwa siri ike, merie ntụkwasị obi na otuto sitere n'aka ndị ahịa na teknụzụ nrụpụta dị elu, ogo ngwaahịa na ọrụ ọkachamara dị mma.
TC nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500 na karịa 5,000 square mita ogbako ebe ugbu a, ha niile bụ ndị na-enweghị ntụ, ebe obibi okpomọkụ na iru mmiri, gụnyere ihe karịrị 1,000 square mita 100 klas na-enweghị ebe obibi.